Arsene Wenger oo tilmaamay dhibaatada uu Lionel Messi ku hayo Antoine Griezmann – Gool FM
(Barcelona) 22 Okt 2020. Sida uu sheegay Tababare Arsene Wenger, Kabtan Lionel Messi ayaa ka hor tagaay Antoine Griezmann inuu isku muujiyo kooxda kubadda cagta Barcelona.
Waxa uu Griezmann ku guuldarreystay inuu qaab ciyaareed fiican soo bandhigo isagoo ka garab ciyaaraya Lionel Messi tan iyo markii uu adduun dhan 120 milyan oo euro uu kaga soo dhaqaaqay dhinaca Atletico Madrid.
Wuxuu ahaa bedel aan la isticmaalin kulankii ay Barcelona 5-1 kaga adkaatay Ferencvaros ee Champions League, sidoo kale Griezmann ayaa ku guuldareystay inuu shabaqa soo taabto afar kulan oo uu saftay La Liga xilli ciyaareedkan.
Intaas kaliya kuma eka ee xiddiga reer France ayaa kaliya helay hal darbo oo uu goolka ku bartilmaameedsaday, isagoo aan wax fursad ahna abuurin.
Dhinaca Messi isagu hal gool ayuu dhaliyey horyaalka, laakiin xiddiga lixda goor ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or ayaa loo diiwaan geliyey inuu 7 darbo goolka ku bartilmaameedsaday, halka uu lix fursadood u abuuray saaxiibadiisa kale ee kooxda.
Yeelkeede, tababarihii waqtiga dheeraa ee kooxda Arsenal, Arsene Wenger ayaa rumeysan xiddiga ay isku Waddanka yihiin ee Griezmann inuu dhib ku qabo inuu garoonka la galo Messi, maadaama weeraryahanka reer Argentine uu ka ciyaaro booska weerarka dhexe oo ah boos uu jecel yahay xiddiga reer France.
Wenger oo arrintaas ka hadlayey ayaana u sheegay beIN Sports: “Inuusan ka ciyaareynin booskiisa saxda ah waxay adkayn doontaa xaaladdiisa muddada dheer”
“Bilowgii, ninkaan uu aqbalay taas, laakiin haddii aan tiisa loo yeelin muddada dheer islamarkaana uu dareemo in booska uu haatan ka ciyaarayo uusan ku muujin karin awooddiisa, wuxuu noqon doonaa mid niyadda ka dhinta.
“Maanta waa qasab inuu ka ciyaaro booska weerarka dhexe, sababtoo ah waa madaale, baasaskiisana waa kuwa dhameystiran, halis ayuu ku noqon karaa baaska ugu danbeeya isagoo dhalinaya goolal
“Laakiin cabaqad ayaa hortaagan, sababtoo ah ciyaartiisa waxay soo galeysaa booska Messi” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey Wenger.